Iyo Poda Toy: Yakajairika "Kudonha Jecha" Vhidhiyo Game yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Yeupfu Toy Iyo ndeimwe yeavo mavhidhiyo emavhidhiyo ayo pamwe asina akawanda midhiya anotarisisa, asi izvo zvakakodzera kuziva. Ndiwo mumwe weiyo mitambo yevanoda zvekare kana mitambo yeRetro. Chikwata chevintage chakatanga kugadzirwa naStanislaw K. Skowronek, uye icho chiri muchimiro che "jecha rinowira" (genre se subset yemasandbox mitambo maunogona kushandisa maviri-mativi epasi giraidhi injini, uchichinja uyu mutambo kuita kunge wehunhu hwekuvaraidza. ).
Izvozvi inochengetwa nevamwe vanogadzira, uye ine rezinesi pasi peGNU GPL v3.0, ndizvozvo zvazviri open source, yemahara, zvakare sezvo iri yemahara. Ehe, iwe unogona kuiwana pakati pemapositi uye mashopu ekushandisa ezvakakurumbira zvekugovera, kuti iwe ugone kuzviisa nenzira yakapusa.
Kana iwe wakambofunga nezve kubhururuka chimwe chinhu, kushandisa simba renyukireya, kana kuti zvimwe kugadzira yako CPU, iyi Iyo Powder Toy inokutendera iwe kuti uite zvese izvo uye nezvimwe zvakawanda. Hongu, kunyangwe ichiratidzika kunge inoshamisa ... sandbox mutambo iyo inofanidza kumanikidza nekumhanyisa kwemhepo, kupisa, giravhiti, uye kumwe kumisidzana kusangana pazvinhu zvakasiyana.
Inopa dzakasiyana siyana zvekuvakisa, magesi ese ari maviri, semvura, pamwe nezvakasungwa, pakati pazvo zvakare zviri zvemagetsi kugadzira michina yakaoma, zvombo, mabhomba, kana chero chinhu chipi zvacho chaunogona kufungidzira.
Kana ukangogadzira zvinokufadza, unogona kuzvishandisa kuti uone kuputika kwavanoita, kana maitiro avanoita zvisikwa zvako pachako. Pamusoro peizvozvo, kune zvakare Lua API iyo yekushandura iro basa kana kutogadzira zvinowedzera zvemutambo wevhidhiyo Iyo Powder Toy. Uye kana izvo zvichiratidzika kunge zvidiki kwauri, uchivhurwa sosi, unogona kugadzirisa kodhi yekodhi yezita iri pachako kuti uwedzere kana kugadzirisa zvinhu kune zvaunofarira ...
Mamwe mashoko - Webhusaiti yepamutemo yeprojekti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Iyo Powder Toy: yakasarudzika "inodonha jecha" vhidhiyo mutambo weLinux